အလင်းရောင်ကြယ်များ: June 2016
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2016 05:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက် မော်တော်ယာဉ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝိတင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်ကို ကားပြေးဆွဲလာတာ ၂၃ နှစ်ကျော်ပြီ တောင်တုန်တာလည်း မရှိဘူး။ တောင်ခါတာလည်း မရှိဘူး။ တောင်ပြိုတာလည်း မရှိဘူး”
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2016 04:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား လမ်းတစ်လျှောက် အချက်ပြစနစ် တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ရထားတွဲဆိုင်းများ ဝယ်ယူခြင်းရန် အတွက်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ဝ၇ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအပြင် ကျန်ရှိသည့် လမ်းပိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2016 04:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သင့်အိမ်ရှေ့မှာရော၊ အမြင်မတော်လမ်းပေါ်မှာရော ၊ မတော်မတရား အနိုင်ကျင့် ဆူပူသောင်းကျန်းနေပါသလား ၊ ဖုန်းသာဆက်လိုက်ပါ။
ရှေ့သို့လှမ်းချီ ၊ တိုးတက်ပြောင်းလည်းနေရန် ကြိုးစားနေသော ဒီမိုကရေစီ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၊ မည်သူမဆို ၊ အေးချမ်း ၊ လုံခြုံစွာ ...နေခြင်သည်မှာ ...
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာ မည်သူမဆိုလွတ်လတ်စွာ သွားလာနေထိုင်နိုင်သလို ၊ အဲဒီလိုနေထိုင်မှု့ဟာ တိကျသော
စည်းကမ်း ဘောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ( ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံခေတ္တနေဘူးသူ-မြန်မာပြည်သား MPT )
ထို့ကြောင့် ပြည်သူပြည်သားများ ၊ လမ်းခရီးသွားလာ ၊ ထိပါးနှောက်ယှက် ၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2016 12:43:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒီဘလောက်ဂါပိုင်ရှင် လုပ်ငန်းကလေးပါ နီးစပ်သူများခေါ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ် ။
လိုအပ်ရင် ... ဖုန်ဆက်လိုက်နော် ...
လုပ်ငန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး .. တတ်သည်ပညာဖြင့် မိသားစု ဝမ်းရေးအတွက်ပါ ။
ဘလောက်ဂါဖတ် မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကာယ ညာဏ စိတ္တသုခဖြင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကားဈေးကွက် အရောင်းအဝယ် တန့်နေသော်လည်း ဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်း မရှိသေး
ပြည်တွင်းကားဈေးကွက် အတွင်း မူဝါဒ အပြောင်းအလဲ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေး၍ ယာဉ်အ ရောင်းအဝယ်
ရပ်တန့်နေသည့် အနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေသော် လည်း ကားဈေးနှုန်းများ ကျဆင်း နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း မော်တော်
ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက ပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၀’ အမျိုးသားအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မူးယစ်မှုနဲ့ ထိုင်းမှာအဖမ်းခံရ
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုက ဒုဥက္ကဋ္ဌတဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားမ၀င်
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူ အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ၁၀ ကီလို၊ ဘိန်းမဲ ၄ ပိဿာကျော်၊ ဘတ်ငွေ ၆
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မည်
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA
လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေ လာမယ့် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့
နေပြည်တော်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:28:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သလို ချစ်တတ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဆို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းအစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၇ ရက်) နံနက် ၁၀ နာရီက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:23:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
“ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီ အင်းစိန်ထောင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု”
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီသည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အင်းစိန်ထောင်သို့ လေ့လာရန် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့သို့ သွားရောက်လေ့လာရာတွင် အင်းစိန်ထောင်ရှိ အကျဉ်းသားအချို့နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
"ထောင်အဆောက်အဦကိုလည်း လိုက်ကြည့်အုံးမယ်လို့ ကြားတယ်။ ထောင်းသားအားလုံးကိုယ်စား ထောင်သား ၆ ဦးနဲ့လည်း တွေ့ဖို့ရှိတယ်ကြားတယ်"ဟု အင်းစိန်ထောင် ဂိတ်စောင့်တဦးကပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2016 10:21:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/15/2016 09:42:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အယ်လ်နီညိုပြီးဆုံးပြီး လာနီညာဖြစ်ဖို့ သေချာလာနေပါပြီ။
(၁) ၂၀၁၆ အယ်လ်နီညိုဟာ အားလျော့ကျလာနေပါတယ်။
(၂) ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့ပိုင်း အီကွေတာရပ်ဝန်းရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်များ
ပုံမှန်မှ ကွာခြားချက်များဟာ Nino 1+2, Nino 3, Nino 3+4 တို့မှာ လာနီညာ သင်္ကေတများဖြစ်တဲ့ အနှုတ်တန်ဖိုးများ(negative values) ပင် ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
(မျတ်ချက်။ အယ်လ်နီညိုဖြစ်ဖို့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန် ပုံမှန်မှကွာခြားမှု(Sea Surface Temperature Anomaly -SSTA) >= +0.5°C ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်)
(၂) လာနီညာဖြစ်ဖို့အလားအလာများတိုးလာနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် (ဇွန်+ဇူလိုင်+သြဂုတ်လ များအတွင်း) ဆက်လက်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလခန့်မှာ လာနီညာ ဖြစ်လာဖို့ သေချာမှု ၇၅% ခန့်ရှိနေပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/07/2016 08:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အာဆီယံနိုင်ငံတွေ ကိုယ်စားတာဝန်ယူပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကမ်းလှမ်း
နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်တွေမှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုယ်စား ဦးဆောင်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် Lee Hsien Loong က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/07/2016 08:43:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာပြည်အတွင်းခိုးဝင်တရုတ်တွေကို ပြည်သူတွေ သတင်းပေးပါက ဖမ်းဆီးအရေးယူတော့မည်
အမရပူရတွင် အိမ်ငှားနေပြီး တရုတ်စာသင်နေသော တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို အရေးယူ
တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ် ဦးသည် အမရပူရမြို့နယ်ရှိ နေ အိမ်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ပြီး
တရုတ်စာ သင်ကြားနေသော ကြောင့် ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက် ဖျက်မှုဖြင့်အရေးယူခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/07/2016 08:39:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ